चुम्बन घातक पनि हुनसक्छ – List Khabar
Home / रोचक / चुम्बन घातक पनि हुनसक्छ
चुम्बन घातक पनि हुनसक्छ
admin February 14, 2022 रोचक Leaveacomment 61 Views
किस डिजिज’ अर्थात् चुम्बन रोग हालै नामकरण गरिएको एउटा रोग हो । इपसन वार भाइरस (ई.बी.भी.) ले संक्रमित तुल्याउने यो रोग खास गरी र्‍यालको माध्यमबाट सर्छ । चुम्बन रोग खास गरी उच्च माध्यमिक तथा कलेजका विद्यार्थी तथा आर्मी, पुलिसलाई लागेको देखिन्छ । हालै गरिएको एक अध्ययनले ८५ देखि ९० प्रतिशत अमेरिकन नागरिकलाई ४० वर्ष नपुग्दै ई.बी.भी. को संक्रमण देखिएको छ । १५ वर्षदेखि १९ वर्षका युवा–युवतीमा चुम्बन रोगको प्रभाव बढी देखिएको छ । भाइरसको संक्रमण भएको ४–५ हप्तापछि मात्र ज्वरो आउने, घाँटी सुक्ने, खाना निल्न गाह्रो हुने, घाँटी तथा छातीमा डावरहरू आउने, काखी सुन्निने, कलेजो तथा पित्त थैली ठूलो हुने आदि लक्षण देखिन्छन् । धेरैजसो व्यक्तिमा यो रोग आफै निको भए पनि कतिपयका लागि खतरनाक पनि साबित हुन सक्छ । यो रोगले निमोनिया, जन्डिस, रक्तअल्पता, मुटु तथा मिर्गौलामा दीर्घकालीन असर पार्छ ।
Next फागुन ०३ गते मंगलबार,आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल